Ixesha kunye nabahlobo 48
Kulunge kakhulu kwindoda eluxanduva ukuba uyiqaphele yonke into eyenzayo emzimbeni kunye nalo lonke ilizwe lobukho. Ukuba umntu-indoda esithetha umgaqo-siseko wokucinga emzimbeni-uthatha isigqibo sokuwushiya umzimba wakhe wenyama, uyawushiya ungazi; ukuba uyawushiya umzimba wakhe ungazi, uya kuba akanakukhetha kuloo nto.
Akukho mfuneko yomphefumlo-ngokuthatha ukuba "umntu" kunye "nomphefumlo" kumbuzo ojolise ukuba ungqinelane-ukushiya umzimba wakhe ukuze ungene kwimeko yamaphupha. Umntu akafane, xa kunjalo, awushiye umzimba wakhe wenyama ngaphambi kokuba afe.
Umntu uyayazi imeko yakhe yokuvuka; uyayazi imeko yephupha lakhe; akayazi ngexesha lokudlula koluphiko ukuya kwinqanaba lokuphupha; Oko kukuthi, phakathi komzuzu wokugqibela xa ephaphile kunye nokuqala kokuphupha. Ukudlula ukusuka kwesokwenyama ukuya kwimeko yephupha kuyahambelana nenkqubo yokufa; Kwaye nangona ngengcinga nokwenza umntu egqiba ukuba uza kuba njani kwaye njani uguquko, akazi nokuba alazi na ixesha elidlulayo, nokuba unokuba neembonakalo zokudlula.
Xa umntu efunda indlela yokungena kunye nendlela yokushiya inqanaba lamaphupha ngokuthanda, uyayeka ukuba yindoda eqhelekileyo, kwaye yinto engaphezulu kwendoda eqhelekileyo.
Oko kuxhomekeka ekubeni zeziphi iingcinga kunye nezenzo zoko umntu ebuza ukuba ngumphefumlo, nakwiziphumo zengqondo nangokomoya kwezinye izinto zobomi bomzimba kwaye ngakumbi okokugqibela. Ukuba umntu ungawushiya umzimba wakhe uphuthele ekufeni, uya kuthanda okanye ugobe ukufa. Ibe ukuba umntu udlule kwinkqubo yokufa ngesazela okanye kungazi, imeko yokuqaphela, into aya kuyingena, iyahambelana kwaye igqitywe yilonto ayifumeneyo ulwazi ngobomi bakhe emzimbeni wakhe wasemhlabeni. Kukungafumani kwaye ube nobuninzi besixa semali kunye nezinto zehlabathi, nokuba zinkulu kangakanani na, okanye zikwimeko entle entlalweni, okanye ukuqhelana nobuchule bezithethe nemvumelwano, okanye ukuphuma nokuqhelana noko abanye abantu bacinge ngako; akukho nanye kwezi. Ukufunyanwa emva kokufa kuxhomekeke kwinqanaba lobukrelekrele umntu afumene kulo ebomini; kwinto ayaziyo ukuba bubomi; ngokulawulwa yiminqweno yakhe; kuqeqesho lwengqondo yakhe kunye neziphelo azisebenzisileyo, nakwindlela abajonga ngayo abanye.
Umntu ngamnye unokwenza ebomini uluvo oluthile lwaseburhulumenteni emva kokuba eswelekile ngokuqonda “into ayaziyo” nento ayenzayo kobu bomi kunye naye, kwaye sithini isimo sakhe kwihlabathi langaphandle. Ayisiyo into ethethwa ngumntu okanye into ayikholelwayo emva kokuba etshilo. Iipolitiki zenkolo ezithi zibe ngamanqaku enkolo kunye nenkolelo ngabafundisi bezenkolo ngethemba okanye ngomsindo nxamnye nehlabathi aziyi kubangela ukuba abantu bangazi kwaye bafumane emva kokuba beswele into ababevile ngayo ngaphambili, nokuba bayakukholelwa oko bakuvileyo. . Indawo yokufa emva kokuba ifumanekile ayifumaneki njengendawo eshushu elungiselelwe abo bangakholwayo, okanye inkolelo nje kunye nokuba lilungu lecawe akuniki ndawo yeendawo ezikhethiweyo ezulwini. Ukukholelwa emva kokusweleka kwamazwe kunokuchaphazela lawo mabandla kuphela ukuza kuthi ga ngoku anempembelelo imeko yakhe yengqondo kunye nezenzo zakhe. Akukho uthixo emazulwini wokuphakamisa umntu emhlabeni kunye nesifuba sakhe; Akukho sathane ukuba abambe umntu kwi-pitchfork yakhe xa edlula emhlabeni, nokuba zithini na iinkolelo zakhe ebomini, okanye uthembise ntoni okanye wathembisa ngabafundi bezakwalizwi. Uloyiko kunye nethemba ngaphambi kokufa alizukutshintsha izibakala emva kweminyaka yokufa. Iinyani ezisuka kwaye zichaze umntu emva kokusweleka kwamazwe yile: into awayeyazi nokuba yayiyintoni ngaphambi kokuba afe.
Umntu unokukhohlisa abantu ngaye ngelixa esemhlabeni; ngokuziqhelanisa angafunda ukuzikhohlisa ngobomi bakhe bomzimba; kodwa akanakhohlisa obakhe ubuNgcali boPhakamileyo, isiqu, njengoko sibizwa njalo ngamanye amaxesha, malunga noko sele bekwenzile noko bakwenzileyo; Yonke into ayicingeleyo nesohlwaywa ikwinkcukacha nakwinkcitho ebhalisiweyo ngokuzenzekelayo engqondweni yakhe; kwaye ngokomthetho ongenakubaleka nowobuntu jikelele wobulungisa, ekungekho sibheno kuye kwaye kungekho kuphuncuka, uyile nto ebeyicingela nesohlwayo.
Ukufa yinkqubo yokwahlulahlula, ukusuka kwixesha lokumka komzimba wenyama uye kwazi imeko yasezulwini. Ukufa kuhlutha yonke into emntwini engeyonto yezulu. Akukho ndawo ezulwini kukho umvuzo wakhe-wamakhoboka kunye neebhanki zakhe. Ukuba umntu uthe waba sedwa ngaphandle kwabo, akangekhe abe ezulwini. Yiyo kuphela yakhe eya ezulwini eyindawo yezulu, nokungathobi isihogo. Amakhoboka omvuzo kunye nomhlaba kunye neebhanki zihlala zisehlabathini. Ukuba umntu wayecinga ukuba ungabanabo ngelixa ehlala emhlabeni, wayebetha impazamo. Akanakuba nazo. Unokufumana indawo yokuqeshisa ngezinto, kodwa ungumnini kuphela kwinto angenakuphulukana nayo. Into umntu angayilahliyo ihamba naye ukuya ezulwini, ihlale ingekho emhlabeni, kwaye uyayazi ngonaphakade. Unokuwugquma kwaye awugubungele emhlabeni ngezinto ezingahambeli kuye, kodwa uyazi. Imeko yengqondo angena kuyo umntu kwaye ayazi ngexesha lobomi ayokungena kwaye ayazi emva kokuba efile, ngelixa ebomini bomzimba uphazamiseka ziinkxalabo kunye nokukhathalela kwehlabathi. “Ezindongeni,” okanye ezulwini, oko akwaziyo kukhululekile ekoyikeni nasicaphukisweni. Nantoni na ethintela ulonwabo emhlabeni iyasuswa kuloo meko.